बालसाहित्य लेखक रामविक्रम थापाको बाल्यकालको कथा | Ketaketi Online
Home » बालसाहित्य लेखक रामविक्रम थापाको बाल्यकालको कथा
posted by ketaketionline on Fri, 10/26/2018 - 09:06
यस अंकमा हामीले वरिष्ठ बालसाहित्य लेखक रामविक्रम थापाको बाल्यकालको कथा प्रस्तुत गरेका छौँ । उहाँ आफ्नो बाल्यकालको सम्झना सुनाउँदै भन्नुहुन्छ :
कात्तिक ७ गते सोमवारको दिन तिहारको लक्ष्मीपूजा अर्थात् गाईतिहारे औँसी थियो रे ! बिहान हुने बेलामा, दुईखेप भाले बासेपछि ओखलढुङ्गाको पाखे भन्ने ठाउँको मावली घरमा म जन्मेको रे ! न्वारनमा मेरो नाम रेखबहादुर राखिएछ । पछि खै कसले हो मेरो नाम रामबहादुर राखेछन् । सायद मावली हजुरआमाले नै हुनुपर्छ ! बाल्यकालमा धेरैले मलाई एकलखे लाएर ‘रामे’ भनेर बोलाउँथे । कसैले ‘रामु’ भन्थे त कसैले ‘ठुले’ । गाईलाई पकाएको खोले अगेनाबाट निकालेर आमा बाहिर गएका बेला बामे सर्दै म त्यहाँ पुगेछु । पन्युले तातो खोले झिकेर निधारमाथिको थाप्लामा राखेछु । तातो खोलेले मेरो कलिलो टाउको खुइल्याएछ । कुखुराको अण्डा फुटाएर मावलकी हजुरआमाले दबाइ लाइदिनु भएछ । के को ठिक हुनु नि अण्डाले ! मलाई सदरमुकाम ओखलढुङ्गा लगिएछ । उपचार गर्दै डाक्टरले भनेछन् : यो बालक बाँच्न गाह्रो छ, बाँच्यो भने पनि दिमागमा ठूलो असर हुन्छ । डरले काम्नु भएछ आमा र हजुरआमा । देब्रे कुमछेउको पाखुरामा २-३ सुइ (इन्जेक्सन) लाइदिएछन् । मुस्किलले धन्न बँचेछु म ।
५–६ वर्षको उमेरमा दिक्तेलबाट बुबाले ‘ पहिला किताब’ किनेर ल्याइदिनु भयो । त्यही किताबबाट मलाई बुबाले क, ख, अ, आ, क का र १, २ सिकाउनुभो । नेपाली अक्षर चिनेपछि त्यही पहिला किताबबाट नेपाली अक्षरकै सहारामा ए, बी, सी, डी म आफैँले पढेँ । मेरो बुबालाई अंग्रेजी नआउने र सिकाउने गाउँमा अरु कोही थिएनन् । लेख्नलाई १-२ महिना काठको पाटीमा माटोको धूलो राखेर बुबाबाटै सिकेँ । त्यसपछि बाँसको टपेसमा अँगारले लेखेँ । बाँसको टपेसलाई भुइँमा दलेर काउसो फालेर अनि लेखिन्थ्यो । अलिकपछि, तितेपातीको मसीमा बाँसको कलम चोबेर काँचो (नेपाली) कागजमा पनि लेखियो केही समय । ३ रूपैयाँको टेको कलम र १० पैसा गोटाको टाँक मसी किनेर फुल्टिनले लेख्ने भइयो नि अलिकपछि त । थोत्रे भोटाको गोजीमा फुल्टिन (टेको कलम) भिर्नुको त्यो बेलाको खुसीलाई शब्दमा व्यक्त गर्न कहाँ सकिन्छ र आज ।
आफ्नै गाउँ बाम्राङमा सावित्रा प्रा.वि. नामको ३ कक्षासम्म पढाई हुने स्कुल त थियो । तर सामातुङका राई केटाहरूले कुट्छन् भन्ने डरले भूपध्वज, मकरध्वज र म दिक्तेलको पञ्च प्रा.वि. स्कुल जान्थ्यौँ । आधा घण्टा बाटोको गाउँको स्कुल छाडेर एक घण्टाबढी हिँड्नुपर्ने स्कुल जान्थ्यौँ हामी । घडी हाम्रो पहुँचमा थिएन र घरको भित्तामा घामको ओझेल हेरेर स्कुल जान्थ्यौँ त्यो बेला हामी । टालामा पोको पारेको मकै–भटमास खाजा बाटोमुनिको बनमारा घारीमा लुकाउँथ्यौँ र बेलुकी स्कुलबाट फर्कदा खान्थ्यौँ । २ महिनाजति यसरी दिक्तेलको स्कुल धाएपछि मचाहिँ आफ्नै गाउँको बाम्राङ स्कुलमा जान थालेँ । ‘खोजिस्’ भन्दै घुस्सी उभm्याउँदै मसिना राई केटाहरू छेउछेउ आउँथे र मुक्याइहाल्थे । खुब कुटाइ खाइयो एक महिनाजति त । मलाई कुट्ने ती फुच्चे केटाका दिदीहरू निकै ठूला (१६-१७ वर्षका) थिए र हामीसँगै एक कक्षामा पढ्थे । उनीहरूलाई म जोड र घटाउ हिसाब सिकाइदिन्थेँ । त्यसपछि भने ती दिदीहरूले भाइहरूलाई सम्झाएर मलाई कुट्न दिएनन् । राई केटाहरूले कुट्न छाडे त ः मैले यसो भनेपछि दिक्तेल जाँदै गरेका मेरा भतिज साथीहरू भूपध्वज र मकरध्वज पनि मसित बाम्राङ स्कुल नै जान थाले ।
श्री सावित्रा प्रा.वि. बाम्राङमा कक्षा १ र २ मा प्रथम भएकाले कक्षा ३ नै नपढी कक्षा ४ मा पढ्न मलाई श्री सरस्वती मा.वि. दिक्तेलमा बोलाएर भर्ना गरियो । प्र.अ. भवकृष्ण ढकाल र शिक्षक पवनकुमार थापाले मेरो बीचको नाम ‘बहादुर’ को ठाउँमा ‘बिक्रम’ बनाइदिनुभो । अब म ‘रामबहादुर’बाट ‘रामविक्रम’ भएँ । आफ्नो छँदाखाँदाको ‘बहादुर’ हराएकोमा केही दिन म निकै दुःखी भएँ । नाम मात्र होइन मेरो जन्ममिति पनि फेरेर कताबाट कता पु¥याइदिनु भयो । कक्षा ४ मा पनि प्रथम भएर कक्षा ५ मा पुग्दा मेरो रोलनम्बर १ त भयो । केही महिनापछि मासिक शुल्क रू. ३ तिर्न नसक्दा मेरो नाम काटिने चेतावनी आयो । नाम काटिएर आफ्नो रोलनम्बर पछाडि पुग्ने डरले म निकै पिरोलिएँ । चिन्ताले खाना पनि रुच्न छाड्यो मलाई । बुबाले घरको डल्ले भाँडो एकजना बस्नेतकोमा जाकटी राखेर रू. १० ऋण लिई ३ महिनाको शुल्क रू. ९ एकैपटक तिरिदिनु भयो । यसरी धन्नले मेरो नाम काटिएन । कक्षा ५ को अन्त्यतिर मलाई विद्यालयबाट निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरियो र मैले मासिक शुल्क तिर्नु परेन । कक्षा ६ मा पुगेपछि नेपाल बाल संगठन मार्फत् विदेशी छात्रवृत्ति पनि पाउँन थालेँ । चौमासिक रुपमा १८ पाउण्ड ४१ सेण्ट (बेलायती मुद्रा) १० कक्षासम्म पाइरहेँ । मेरा स्पोन्सर, दाता थिए फिनल्याण्डका श्री आर.वि.जोर्गस्ट्रोम । हरेक ४ महिनामा पैसा पाएपछि अंग्रेजी भाषामा मैले उनलाई चिठी लेख्नु पथ्र्यो । तर उताबाट पैसाचाहिँ आउँथ्यो चिठीको जवाफ कहिल्यै आउँदैनथ्यो । हरेक साल नयाँ पाठ्यपुस्तक दिक्तेलका समाजसेवी श्री परशुराम बजिमयले किनिदिनु हुन्थ्यो । घरको आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको, पढाईमा अब्बल र अनुशासित (मेधावी) विद्यार्थी भएको नाताले मैले यी सबै सुविधा पाएको थिएँ । अब भने मेरो पढाई सहज भएको थियो ।
बिहान र बेलुकी घाँस-सोतर काट्ने र पत्कर सोर्ने काम गरिन्थ्यो । हिउँदे बिदामा जङ्गलमा कटुस टिप्न पनि गइन्थ्यो । बर्षा याममा घुम र बोरा ओडेर मकैबारीभित्र कोदो रोपियो । एकपटक त ७ दिन हिँडेर बेल्टारबाट घरमा एक ढाकर नुन पनि पु¥याइयो । ५ कक्षामा पढ्दा ५ पाथी नै नुन बोकेको मैले । फुर्सदमा ढक, सिरुपाते, गट्टा, डण्डीवियो, बाघचाल, काँटाकाँटा जुवारी आदि खेलिन्थ्यो ।
रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रम बेलुकी ५ बजे नियमित जस्तै सुन्थेँ म । पल्ला घरमा इण्डियन फिलिप्स रेडियो थियो । बाहिर दलानको खाँबाको काँटीमा झुण्डिएर निकै जोडले बज्थ्यो त्यो रेडियो । “आओ ! मेरा प्यारा–प्यारा भाइबैनीहरू ! रेडियो नजिक आओ !” भन्ने कार्यक्रम सञ्चालक वासुदेव मुनालको स्वर सुन्नासाथ कँुदेर म पल्लाघर पुगिहाल्थेँ । हुलाकबाट पठाएको मेरो बालकविता (हामी बालक) बाल कार्यक्रममा सुन्दा त खुसीले म झण्डै ढलेको थिएँ । रेडियो नेपालको फर्माइस र चौतारी कार्यक्रममा आफ्नो नाम सुन्न पाउँदा पनि औधी खुसी भइन्थ्यो । रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रम र अलिकपछि साहित्य संसार सुनेरै मैले कविता लेख्न थालेको हुँ ।
५ र ६ कक्षामा हामीलाई अंग्रेजी पढाउने अमेरिकन मिस हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकी पिसकोरबाट स्वयंसेवकको रुपमा पढाउन सुश्री डाना फिवलकर्न श्री सरस्वती मा.वि. दिक्तेलमा २ वर्षका लागि आउनु भएको थियो । डानाले हामीलाई प्रयोगात्मक शैलीमा बडो व्यवहारिक ढंगले रमाइलो पारामा सिकाउनु हुन्थ्यो । वालमैत्री शैलीको वास्तविक सिकाइ थियो त्यो । हरेक पाठ शैक्षिक सामग्रीसहितको हुन्थ्यो र हामी छर्लङ्गै बुझेर सिक्थ्यौँ । परीक्षामा म जहिल्यै पूर्णाङ्क नै प्राप्त गर्थेँ । मेरो हाइएस्ट मार्क जहिल्यै अंग्रेजीमै हुन्थ्यो ः १०० मा १०० नै । क्रसवर्ड पजल मिलाउन उस्तै रमाइलो हुन्थ्यो । स्कुलमा हुने साप्ताहिक कविता प्रतियोगितामा पनि प्रथम हुन म अरुलाई दिन्नथेँ । बालसाहित्यकार कल्पना प्रधान गुरुआमाको नेपाली कक्षा उस्तै रमाइलो हुन्थ्यो । वहाँको “मेरो सानो खरायो” मीठो कविता हामीले अगाडि नै पढिसकेका थियौँ । कल्पना गुरुमाले मलाई कक्षामा कविता भन्न लाउनु हुन्थ्यो । कहिलेकाहिँ पुरस्कार स्वरुप मोटा कपी पनि दिनुहुन्थ्यो । त्यस्ता कपीलाई हामी लाइट कपी भन्थ्यौँ र तिनै कपीमा म कविता लेखेर भर्थेँ । अंग्रेजीकी डाना र नेपालीकी कल्पना गुरुआमालाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।
बाल्यकालीन ती रमाइला दिनहरू फर्केर फेरि आए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर के गर्नु–समयले मान्छेलाई पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन ।
बराहपोखरी—४, खोटाङ । मो.नं. ९७५३००४३६०